Blog Page – Page 2 – birmaduu gospel media
birmaduu gospel media
SABQUUNAMTII WANGEELAA BIRMADUU
Wanta nu dura jiru duwwaatti haa hiixannu.
Pawuloos adeemsa amantii figicaa dorgommeen wal fakkeessa. Continue reading →
Maddi Gammachuu Keenyaa Waaqayyotti Gammaduu Keessaati
Phaawuloos ergaa isaa gara warraa Filiphisiiyus kana kessatti eggaa yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedhu maal jechuu barbaade laata? Jireemyi biyya lafaa hedduminaan dadhabbii fi sodaan kan guuteedha. Namin wanta amma fuula isaa jiru irra kan hafe kan boorrii fi borduubaa kallattin qaarsisee guutuutti arguu hin danda’u. Continue reading →
Ibsaa Kee Ol Kaasii Ibsadhuu
Waaqayyo akeekaan jireenya biyya lafaa kana keessa nu kaa’e. Jireenyi ilma namaa tasa hiiika tokko malee ardii kana irra hin kayyamne. Macaafa Qulqulluu irraa akkas jedha; “Ani Waaqayyo kanan si uume, gadameessa haadha kee keessatti kanan si tolche, kanan si gargaarus…” (Isa. Continue reading →